Qiimaha Warshada Shiinaha Qiimaha Hoose ee Cable Qaybinta Sanduuqa Soosaarayaasha-shengte iyo alaab-qeybiyeyaal |Shengte
Qiimaha Warshada Qaybinta Cable Voltage Low santuuqa Alaabta-shengte
Taxanaha qaybiyeyaasha fiilooyinka korantada hooseeya waxay isticmaalaan inta jeer ee la qiimeeyay 50/60HZ, habka korantada ee 380V (660V) lagu qiimeeyay sida qaybinta korantada iyo xakamaynta qalabka korontada, iftiinka iyo qaybinta.
Waxay ku habboon tahay meelaha bannaanka ah ee bannaanka ah sida jawiga qallafsan ee kala duwan, xarumaha is beddelka iyo qaybinta, warshadaha iyo warshadaha macdanta iyo waddooyinka magaalooyinka, meelaha beerta, dhismayaasha dhaadheer, garoomada diyaaradaha iyo wixii la mid ah.
Waxay si gaar ah ugu habboon tahay in loo isticmaalo warshadaha leh gaasaska wasakhaysan sida batroolka iyo warshadaha kiimikada, iyo sidoo kale meelaha ceeryaamo milixdu ku badan tahay sida xeebaha iyo jasiiradaha.
A. Qaybta sanduuqa waxa ay ka samaysan tahay walxo polymer ah oo si buuxda loo dahaadhay (SCM) iyada oo la riixayo heerkul sarreeya.Sanduuqa oo dhan waxaa lagu soo ururiyaa giraanta qayb kasta oo shaqaynaysa waxayna leedahay saxnaanta wax soo saarka sare.Qaab dhismeedkeedu waa cusub, is haysta oo fudud in la isku keeno.Waxayna leedahay astaamo u gaar ah naqshadaynta roobka iyo naqshadaynta hawo-qaadista.
B. Golaha wasiirada ayaa leh waxqabad koronto oo aad u wanaagsan.Tilmaanta dahaarka, xoogga dielectric, calaamadaynta caabbinta caabbinta daadinta iyo index caabbinta gabowga ayaa aad u fiican.Uumi si dhib leh ayay uga dhacdaa xitaa meelaha aadka u qoyan iyo qallafsanaanta.
C. Waxayna leedahay awood farsamo oo aad u xoog badan.Iyada oo waxqabadka badbaadada aan la barbar dhigi karin ee sanduuqa birta ah, xitaa haddii xariiqda gudaha sanduuqa la jebiyo ama waxyeello u geysto saameynta xoogga dibadda, ma keeni doonto in sanduuqa lagu dallaco, gaar ahaan ku habboon meelaha dadku ku badan yahay iyada oo aan lahayn shabakad ilaalin.
D. Dhammaan qaybaha sanduuqa ayaa la qaabeeyey oo lagu ururiyey dhismooyin dhismo, sidaas darteed waxay leedahay saxnaanta cabbirka sare iyo rakibida habboon.
E. Waxqabadka dahaarka oo heersare ah.Golaha wasiirada ayaa si buuxda u dahaaran, iyada oo aan lagu darin wax qabad heer sare ah oo heer sare ah oo ka mid ah walxaha nidaamka dhulka laftiisa iyo qaabeynta qaab dhismeedka hawo-qaadista gaarka ah, waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa suurtogalnimada uumiga iyo dhaxan ee golaha wasiirada.
F. caabbinta daxalka kiimikada heer sare ah iyo waxqabadka, waxay si wax ku ool ah u diidi kartaa aashitada daciifka ah, alkali daciifka ah, buufinta milixda, daxalka roobka.
G. Iska caabin gabow heer sare ah.Ku darida walxaha ka-hortagga ultraviolet ee walxaha waxay ka dhigaysaa sanduuqa mid sii waara oo wuxuu leeyahay nolol adeeg dheer.
H. Qaab dhismeed si buuxda u xidhan oo leh nashqad gaar ah oo aan roobka lahayn, heerka ilaalinta ilaa IP44 ama xataa IP54.
I. Qaybaha hodanka ah ee gudaha ayaa ka dhigaya rakibidda qaybaha korantada mid fudud, habboon, miisaan fudud, xoog sare, caabbinta heerkulka sare iyo dib u dhigista ololka, qaabka guud waa mid deggan, ammaan ah oo la isku halleyn karo.
J. Qaab-dhismeedka is haysta, naqshad qurux badan iyo midab dabiici ah, iswaafaqsan oo qurux badan, aan lahayn wasakh iftiin leh.
Nambarada taxan Magaca Shirkadda qiimaha caadiga ah Waxqabadka iyo Tilmaamayaasha Heerka tijaabada
1 cufnaanta g/cm2 1.75 ilaa 1.95 1.84 GB1033
2 Nuugista biyaha mg ≤ 20 18.3 GB1034
3 Heerkulka Dusha Sare ee kulaylka ° C ≥ 240 240 GB1035
4 Xoog saameyn leh KJ / m2 ≥ 90 124 GB1043
5 xoog laabasho Mpa ≥ 170 210 GB1042
6 Iska caabinta dahaarka (Caadi) Ω ≥ 1.0×1033 3.0×1013 GB1410
7 Iska caabin dahaarka (immersion 24h) Ω ≥ 1.0×1012 5.3×1012 GB1410
8 Awoodda Soo noqnoqoshada Korontada MV/m ≥ 12.0 17.1 JB7770
9 Khasaaraha Korontada (1MHz) -- ≤ 0.015 0.013 GB1409
10 Korontada joogtada ah ee qaraabada ah (1MHz) -- ≤ 4.5 4.2 GB1409
11 Iska caabin koronto s ≥ 180 190 GB1411
12 Tusmada Calaamadaynta Leakage (PTI) v ≥ 600 600 GB4027
13 Dib u dhaca ololka fasalka FVO FVO JB7770
14 Sunta qiiqa fasalka II II JB7770
15 Cufnaanta qiiqa fasalka II Ⅲ JB7770
Nambarada taxan Mashruuca Shirkadda cabbir farsamo
1 Inta jeer ee la qiimeeyay Hz 50/60
2 Danab shaqaynaysa oo la qiimeeyay V AC 380/660
3 Danab dahaarka la qiimeeyay V AC 690/800
4 Hadda la qiimeeyay A ≤ 630
6 Lagu qiimeeyay heerka ugu sarreeya ee loo dulqaadan karo hadda Ka 100
7 1 daqiiqo inta jeer ee awoodda u adkeyso danab V 2500
8 Awood jabinta Ka 100
9 Heerka ilaalinta -- IP44
10 Heerka wasakhowga -- II
Hore: transformer nooca qalalan
Xiga: Warshada OEM 10KV Fasalka S11 Taxane Transformer Saliid-Imika Beddelka Awoodda Si Buuxda Loo Xidhay-shengte
Qiimaha ugu Fiican DFW-12 Cable Laanta Sanduuqa Iibiyaha-iyadu